‘ड्रिम गर्ल’ मा को-को छन् कलाकार ? « Ramailo छ
‘ड्रिम गर्ल’ मा को-को छन् कलाकार ?
प्रकाशित मिति : Nov 10, 2017
समय : 9:23 am
निर्देशक ऋषिराज आचार्यले ‘ड्रिम गर्ल’ नामक फिल्म निर्माण गर्ने भएका छन् । फिल्मको बिहीबार राजधानीको महाराजगन्जस्थित साम्बला होटेलमा शुभमुर्हत गरियो । निर्देशक ऋषिकै लेखन रहेको ‘ड्रिम गर्ल’ की ड्रिम गर्लको भूमिकामा छिन, आश्मा गिरी । लगभग सात वटै प्रदेशमा बिभिन्न चरणमा गरिएका अडिसनबाट आश्मा ड्रिम गर्लका लागि छानीएको निर्देशक ऋषिले बताए ।
फिल्ममा आश्माको जोडीका रुपमा आकाश श्रेष्ठ छ । आकाशले यसअघि म त तिम्रै हुं, तिमीसंग र ब्ल्याक फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् भने आश्माको यो नै डेब्यु फिल्म हो । दक्षिण भारतको रिल एण्ड रियल सिनेमा नामक कम्पनी र निर्देशक ऋषिराजको आरबि मुभीजको ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्मको सुटिङ शुक्रबारदेखि सुरु हुदैछ । फिल्मको मुख्य निर्मातामा अर्जुन शर्मा र निर्देशक आचार्य स्वयम् छन् । त्यस्तै, सहनिर्मातामा रामेश्वर धिताल र रिल एण्ड रियल सिनेमाका तर्फबाट अन्टो रोचा रोवन छन् । ड्रिमगर्लमा आकाश र आश्माका साथमा सरोज खनाल, अर्जुन श्रेष्ठ, विल्सन बिक्रम राई, रुपा सुवेदी, पूजा पराजुली, लक्ष्मी गिरी, सुरवीर पण्डित प्रमुख भूमिकामा छन् ।
राजधानी, मुस्ताङ, रारा तालका साथै कतारका बिभिन्न स्थानमा खिचीने फिल्ममा अर्जुन पोखरेलले संगीत छ । राहुल राईले खिच्नेको कोरियोग्राफी गम्भीर बिष्टले गर्दैछन् । सम्राट बस्नेतले द्धन्द्ध निर्देशन गर्ने फिल्म नवीन निरौलाले सम्पादन गर्नेछन् ।